Iindaba - Luluphi udidi kunye nemisebenzi yeebhakethi
Abembi basebenza kwizihlandlo ezahlukeneyo kwaye baya kukhetha izixhobo ezahlukileyo zokwenza izixhobo, izixhobo eziqhelekileyo ezinje ngamabhakethi, iziqhekezi, iiripers, izibopho zamanzi kunye nokunye. Kuphela ngokukhetha izixhobo ezifanelekileyo, apho sinokufumana isantya esiphezulu kunye nokusebenza ngokukuko kweemeko ezahlukeneyo zomsebenzi. kodwa uyazi? Kwiimeko ezahlukeneyo zomsebenzi, kukho iintlobo ezingaphezu kweshumi zeemele zokumba, nganye kuzo inezibonelelo zayo. Ezi zilandelayo ziibhakethi eziqhelekileyo ze-excavator. Ukuba nazo ngokuqinisekileyo kuya kukwenza Izixhobo zibe namandla ngakumbi!
1. Ibhakethi eliqhelekileyo
Ibhakethi eliqhelekileyo libhakethi elisemgangathweni eliqheleke kakhulu kwizimbiwa ezincinci neziphakathi ngokomlinganiselo. Isebenzisa ubukhulu beplate, kwaye akukho nqubo icacileyo yokuqinisa emzimbeni webhakethi. Iimpawu zezi: ibhakethi linomthamo omkhulu, indawo enkulu yomlomo, kunye nomgangatho omkhulu wokufumba, ke ngoko unendawo yokugcwalisa ephezulu, ukusebenza ngokukuko komsebenzi, kunye neendleko eziphantsi zemveliso. Kufanelekile ukuba kube lula ukusebenza kwiindawo ezinje ngokugrumba udongwe ngokubanzi kunye nokulayishwa kwesanti, umhlaba kunye negrabile. Ikwaziwa njengemele yokuhambisa umhlaba. Izinto ezingalunganga zezi: ngenxa yobunzima obuncinci beplate, ukunqongophala kwetekhnoloji yokuqinisa, ezinje ngeepleyiti zokuqinisa kunye neepleyiti zokunxiba, ubomi bufutshane.
2. Yomeleza ipheyile
Ibhakethi eliqinisiweyo libhakethi elisebenzisa izixhobo zentsimbi ezinamandla okumelana nokuqina ukomeleza uxinzelelo oluphezulu kunye neendawo ezinxitywa ngokulula kumgangatho wokuqala webhakethi. Ayizuzi njengelifa kuphela zonke izibonelelo zebhakethi eliqhelekileyo, kodwa ikwaphucula kakhulu amandla kunye nokumelana. Abrasiveness kunye nobomi inkonzo ende. Kufanelekile ukuba kwenziwe imisebenzi enzima njengokumba umhlaba onzima, amatye athambileyo, igrabile kunye nokulayishwa kwegrabile.
3. Ibhakethi ledwala
Ilitye lokomba ibhakethi lamkela iipleyiti ezingqindilili lilonke, longeza iipleyiti zokuqinisa emazantsi, longeza oonogada basecaleni, ukufaka iipleyiti zokhuselo, amazinyo ebhakethi anamandla aphezulu, alungele ukulayisha amatye, amatye angqingqwa, amatye agugileyo, amatye aqinileyo, ukuqhumisa intsimbi njl. Indawo enzima yokusebenza. Isetyenziswa ngokubanzi phantsi kweemeko zokusebenza ezinzima ezifana nokumba umgodi wentsimbi.
4. Iemele yodaka
Ibhakethi lodaka lwesidanga liyaziwa njengebhakethi lokwehla. Ayinamazinyo kwaye inobubanzi obukhulu. Ibhakethi lilungele ukucheba umphezulu wamathambeka ngomthamo omkhulu, kunye nokuntywila kwemilambo kunye nemisele.
5. Ukulwa kweSieve
Kufanelekile ukuba kugrunjwe izinto ezahlukileyo ezikhululekileyo. Ukombiwa nokwahlulwa kunokugqitywa ngaxeshanye. Isetyenziswa ngokubanzi kumasipala, ezolimo, amahlathi, ukugcina amanzi kunye neeprojekthi zomhlaba.
Amazinyo ebhakethi axhomekeke kwimeko yokusebenza ngexesha lokusetyenziswa ukumisela uhlobo oluthile lwamazinyo emele. Ngokubanzi, amazinyo ebhakethi aneentloko ezisicaba asetyenziselwa ukumba, isanti efumileyo kunye namalahle. Uhlobo lwe-RC lwamazinyo ebhakethi asetyenziselwa ukumba amatye amakhulu aqinileyo, kwaye uhlobo lwe-TL lwamazinyo ebhakethi asetyenziselwa ukumba amalahle amakhulu. Amazinyo ebhakethi e-TL anokunyusa izinga lokuveliswa kweqhuma lamalahle. Ekusetyenzisweni kwangempela, abasebenzisi bahlala bathanda uhlobo lwenjongo ye-RC yohlobo lweebhakethi. Kuyacetyiswa ukuba ungasebenzisi uhlobo lwe-RC amazinyo ebhakethi phantsi kweemeko ezizodwa. Kungcono ukusebenzisa amazinyo ebhakethi anentloko entloko, kuba i-RC yohlobo lwamazinyo ebhakethi iya kunyuka ngathi "ngenqindi" emva kokudinwa kangangexesha elithile. Ukumelana nokumba kuncitshisiwe kwaye amandla ayamoshwa. Amazinyo ebhakethi asemlonyeni othe tyaba asoloko egcina umphezulu obukhali ngexesha lenkqubo yokunxiba, ecutha ukumba ukuxhathisa kunye nokonga amafutha.
02. Buyisela amazinyo ebhakethi ngexesha
Xa incam yenxalenye yebhakethi izinxiba ngokuqatha, amandla afunwayo ngumcoci wokusika ngexesha lomsebenzi wokumba ngokuqinisekileyo aya kwandiswa kakhulu, okukhokelela ekusetyenzisweni kakhulu kwamafutha kunye nokuchaphazela ukusebenza ngokukuko. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukubuyisela amazinyo amatsha ebhakethi ngexesha apho ukunxiba izinyo leemele kunzulu ngakumbi.
03. Buyisela isihlalo sezinyo ngexesha
Ukunxiba kwesihlalo samazinyo kubaluleke kakhulu kubomi benkonzo yebhakethi. Kuyacetyiswa ukubuyisela isihlalo sezinyo emva kokuba i-10% -15% yesitulo samazinyo iphelile, kuba kukho inani elikhulu lokunxiba phakathi kwesihlalo samazinyo kunye namazinyo emele. Isikhewu esikhulu sitshintsha inqanaba lokulingana kunye noxinzelelo lwezinyo zebhakethi kunye nesihlalo samazinyo, kwaye izinyo zebhakethi liphuka ngenxa yotshintsho lwenqaku lamandla.
04.Ukuhlolwa kwemihla ngemihla kunye nokuqiniswa
Kumsebenzi wolondolozo lwemihla ngemihla we-excavator, thatha imizuzu emi-2 ngosuku ukukhangela i-emele. Iziqulatho eziphambili zohlolo zezi: inqanaba lokunxiba komzimba webhakethi kunye nokuba kukho iintanda. Ukuba iqondo lokunxiba linzima, ukuqiniswa kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Ngokubhekisele kumzimba webhakethi onentanda, kufuneka ulungiswe nge-welding kwangexesha ukuthintela ukwandisa ubude beentanda ngenxa yokulibaziseka okulungisiweyo kunye nokubangela ukugcinwa okungenakwenzeka. Ukongeza, kufuneka ukhabe amazinyo emele ngeenyawo zakho ukujonga ukuba amazinyo azinzile na. Ukuba amazinyo akhululekile, kufuneka aqiniswe ngokukhawuleza.
05. Guqula indawo emva kokunxiba
Ukuziqhelanisa kungqine ukuba ngexesha lokusetyenziswa kwamazinyo emele yeembiwa, izinyo elingaphezulu lebhakethi linxiba i-30% ngokukhawuleza kunezinyo langaphakathi. Kuyacetyiswa ukuba ubuyise imeko yamazinyo angaphakathi nangaphandle emva kwexesha lokusetyenziswa.
06. Nika ingqalelo indlela yokuqhuba
Indlela yokuqhuba yomqhubi we-excavator nayo ibaluleke kakhulu ukuphucula ukusetyenziswa kwamazinyo emele. Umqhubi we-excavator kufuneka azame ukungarhoxisi i-emele xa ephakamisa i-boom. Ukuba umqhubi uphakamisa i-boom ngelixa erhoxisa i-emele, lo msebenzi uya kuthi Amazinyo ebhakethi abe nokutsalwa okuphezulu, ukuze amazinyo ebhakethi aqhekezwe ngaphandle nangaphezulu, kwaye amazinyo ebhakethi akrazuke. Lo msebenzi ufuna ingqalelo ekhethekileyo kulungelelwaniso lwentshukumo. Abanye abaqhubi be-excavator bahlala besebenzisa amandla amaninzi ekwandiseni ingalo kwaye bathumele i-forearm, kwaye ngokukhawuleza "benkqonkqoza" ibhakethi elityeni okanye banyanzele ibhakethi eliweni, eliya kuqhekeza amazinyo emele, okanye Kulula uqhekeze ibhakethi kwaye wonakalise iingalo.
Umqhubi we-excavator kufuneka aqwalasele i-angle yokumba ngexesha lokusebenza. Xa amazinyo ebhakethi emba phantsi ngokungagungqiyo kumphezulu osebenzayo, okanye i-camber angle ayikho ngaphezulu kweedigri ezili-120, ukunqanda ukwaphula amazinyo ebhakethi ngenxa yotyekelo olugqithisileyo. Kwakhona ulumke ungaguqulisi ingalo eyombiwa ekhohlo nasekunene phantsi kwemeko yokuxhathisa okukhulu, okuya kubangela ukuba amazinyo ebhakethi kunye nesihlalo segiya sophulwe ngenxa yomkhosi ogqithisileyo ngasekhohlo nasekunene, kuba umgaqo woyilo loyilo lweemodeli ezininzi Amazinyo ebhakethi awathatheli ingqalelo amandla asekhohlo nasekunene. uyilo.